डा. पाण्डेलाई प्रश्नः आयुर्वेदिक औषधिले कोरोना निको पार्छ ? « Kathmandu Pati
डा. पाण्डेलाई प्रश्नः आयुर्वेदिक औषधिले कोरोना निको पार्छ ?
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तिव्रदरमा बढिरहेको छ । संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले १५ दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । जनस्वास्थ्यका मागदण्ड पालना नगर्दा संक्रमणदर फैलिएको जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
साथै मानिसहरुले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन अनावश्यक औषधिको सेवा गर्ने गरेका छन् । कोरोनाबाट जोगिन के गर्ने, इम्युनिटी पावर बढाउन के गर्नेलगायतका विषयमा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डले विस्तुतमा बताएका छन् । प्रस्तुत छ कोरोनाबारे डा. पाण्डेका जिज्ञासा र जवाफः
– ज्वरो, खोकी, सास फेर्न गाह्रो, पखाला, बान्ता, थकान, छालामा बिमिरा आदिमध्ये केहि लक्षण मिलेमा, संक्रमितसंग भेट भएको अवस्थामा तथा कतै यात्रा गरेको अवस्थामा परीक्षण गर्नुपर्दछ ।
समयमै पिसिअर गरेमा रोग पत्ता लाग्छ । आफु आइसोलेसनमा बसेमा परिवारलाई संक्रमणबाट बचाउन सकिन्छ । रोग पत्ता लागेपछि गाह्रो भएमा कहाँ ÷ के उपचार गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ । तसर्थ पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्दछ ।
यसपटक पिसिआरबाहेक छातीको एक्सरे गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कोभिड निमोनिया देखिएमा तदनुसारको उपचार गर्दा गम्भीर अवस्था आउनबाट बचिन्छ ।
– खोप लगाएका व्यक्तिलाई पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेमा संक्रमण हुन्छ । उनीहरुको संक्रमण अन्य व्यक्तिलाई सर्न सक्छ । फरक यो छ कि खोप लगाएका व्यक्तिको गम्भीर हुने वा मृत्यु हुने दर नगण्य छ । प्रमाणित खोप जुनसुकै लगाएपनि गम्भीर हुनबाट बचाएको छ ।
५. के जडिबुटी वा आयुर्वेद औषधिले कोभिड निको पार्छ ?
– पार्दैन । सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रा मिलाएर सेवन गर्दा शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने चीन, भारत, मदागास्कर, श्रीलंका आदि देशमा भएका अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् ।
– पारासिटामोल ज्वरो १०० डिग्रीको आसपास पुगेमा वा टाउको ÷ जिउ दुखेमा मात्र सेवन गर्ने हो । नियमित सेवन गर्नुहुँदैन ।
– अक्सिमितर १२०० देखि ५ हजारसम्म पर्छ । महँगो किन्नुपर्दैन । औषधि पसल वा सर्जिकल हाउसमा यो किन्न पाइन्छ । ९५ देखि १०० यसको नर्मल भ्यालु हो ।
– सामान्य अवस्थामा चिकित्सकको निगरानीमा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्दछ । यदि सास फेर्न गाह्रो भए, अक्सिजनको मात्रा कम भए, निकै गाह्रो भए तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ । भरे वा भोलि जान्छु भन्नु हुँदैन । अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा जांच गराएपछि तपाईंको अवस्था अनुरुप चिकित्सकले उपचारको ब्यबस्था गर्छन् ।
११. सुत्केरी संक्रमण भएमा बच्चालाई दुध चुसाउने कि नचुसाउने ?
– सुत्केरीले मास्क लगाएर, बच्चाको बिपरित दिशामा टाउको फर्काएर तथा स्तनलाई राम्रोसंग सफा गरेर दुध चुसाउन मिल्छ । दुध चुसाउने बेला बाहेक बच्चालाई छुट्टै राख्नु राम्रो हुन्छ । सुत्केरी बस्ने कोठाको झ्याल ÷ ढोका खुला हुनुपर्छ ।
– हुँदैन ! फोक्सोमा संक्रमण ÷ निमोनिया ÷ पानी जम्ने आदि भएमा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । रोगको उपचारसंगै अक्सिजन लिंदा फाइदा गर्छ । अक्सिजन आफैंले रोग निको गर्दैन । फोक्सोको अवस्था अनुसार अक्सिजनको मात्रा निर्धारण हुन्छ । तसर्थ अस्पताल भर्ना भएर वा निको भएर घरमा फर्के पछि सास फेर्न गाह्रो भए चिकित्सकको सल्लाह अनुसार अक्सिजन लिनुपर्दछ ।
– बिभिन्न बैज्ञानिक परीक्षणबाट कोभिड र खोपको पुष्टि भएको छ । अनधिकृत व्यक्तिका भ्रामक कुरा सुन्नुहुँदैन । सरकारले दिने सूचना र बिज्ञका कुरा विश्वास गर्नुपर्दछ । कोरोना के हो ? भन्नको लागि अस्पतालमा छटपटाइरहेका संक्रमित हेरे स्पष्ट बुझिन्छ । खोपले काम गर्ने ÷ नगर्ने बारे खोप लगाएका व्यक्तिको मृत्युदर हेरे थाहा हुन्छ ।
१८. लकडाउन किन, कति समय आबश्यक हुन्छ ? लकडाउन छोटो गराउन के गर्नुपछ ?
– लकडाउन भनेको जो जहाँ छ, त्यहीं बस्ने हो । नयाँ महामारी आएमा, महामारीको कारण अस्पताल भरिएमा, नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेमा तथा सरकारले तयारी गर्नको लागि लकडाउन गरिन्छ । लकडाउन जति कडा भयो, संक्रमणको चेन त्यति छिटो तोड्न सकिन्छ ।
– दोस्रो लहर अझै २ – ३ महिना रहन्छ । त्यसपछि घट्दै जान्छ । महामारीबाट मुक्त हुनको लागि ७० % नागरिकले खोप लगाउनुपर्दछ । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर भाइरसलाई मान्छेबाट अलग्याउनु पर्दछ ।
– यो महामारीले संसारलाई चपेटामा पारेको छ । सबैको आर्थिक, शैक्षिक, पेशागत तथा अन्य क्षेत्रमा नोक्सान पुर्याएको छ । महामारी नियन्त्रणमा आएपछि ती सबै घाटा सन्तुलनमा आउनेछन् । अहिले जीवनरक्षा गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय हो । योग, ध्यान, प्रबचन श्रबण, संगीत, कला, साहित्य, घरको काम आदिबाट मनलाई सकारात्मक उर्जामा स्थिर राख्न सकिन्छ । तनाब दिने खालका कुरा नसुन्ने ÷ नहेर्ने तथा मनमा कोरोना मात्र बोकेर नहिड्ने हो भने चिन्ताले अस्वस्थ हुने अवस्था उत्पन्न हुँदैन ।
कोरोना ग्राफ बढ्दैः ९२४७ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा ५७६७ डिस्चार्ज
काठमाण्डु – पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९ हजार २ सय
अक्सिजन अभाव देखाउँदै बिरामी भर्ना नगर्ने अस्पताललाई कारबाहीको चेतावनी
काठमाण्डु – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अक्सिजन नलिई आउने बिरामीलाई
बेइजिङबाट ९७५ सिलिन्डर र १३७ थान अक्सिजन कन्सर्नटेटर आइपुग्यो
काठमाण्डु – चीनबाट सिलिन्डर र अक्सिजन कन्सर्नटेटर ल्याइएको छ ।
कोभिड र बजेट अभावका मारमा हुलाकी राजमार्गः भौतिक प्रगति ६३…
काठमाण्डु – राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको निर्माण कोभिड र